फासिवादी दमनको प्रतिरोध – Kite Sansar
– पूर्णबहादुर सिंह
कारण एक, ‘गुप्तचर र सूचक व्यक्ति अत्याचारी शासकका मुख्य सहयोगी हुन् । मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्नु तथा आफूलाई आवश्यक बनाउन युद्ध गर्नु उनीहरूको प्रिय पेसा हो ।’ अरस्तुले भनेजस्तै विगतमा जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन र जनयुद्ध सम्झौतामा टुङ्गिए, जनतालाई धोका भयो । प्रतिक्रान्ति भयो । जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । निराशालाई नयाँ आशामा बदल्दै, प्रतिक्रान्तिलाई नयाँ क्रान्तिमा पुनर्सङ्गठित गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भयो । पार्टी जनतामा झाँगिँदै र जनप्रिय हुँदै गयो । त्यसपछि पार्टीले गर्ने हरेक कार्यक्रम, सभा–सम्मेलन, राजनीतिक अभियान, कामकारबाही आदि सबै दलाल सरकारका लागि टाउकोदुखाइ र आतङ्क बन्न थाले । यिनीहरूले भित्तामा लेखिने नाराहरूलाई मृत्युपत्र, शान्तिपूर्ण जुलुसहरूलाई शवर्याली, विशाल जनसभाहरूलाई अक्टोबर विद्रोह, खाद्य सम्प्रभुताका लागि थाल ठटाउँदा बन्दुकहरू पड्केको, एनसेलले ७२ अर्ब कर बुझाओस् भन्दा बमको आवाज सुन्ने आदिआदि । ‘जब हामी सहिरहन्छौँ, हाम्रा दुस्मनहरूले गाली–गलौज र विभिन्न आरोप–प्रतिआरोप गर्छन् ।
जब बाटो बिराउँछौँ अनि प्रशंसा एवम् आशीर्वाद दिन्छन्’ भनेर माओले भनेझैँ साम्राज्यवादीहरूले विश्वशान्तिका पक्षमा विशेष योगदान गरेको भनेर गोर्बाचोभलाई ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’ नै दिएर प्रशंसा गरेका थिए । साम्राज्यवादीहरूले गोन्जालोहरूलाई पागल, धर्मान्ध, रक्तपिपासु, पोलपोटवादी, जडसूत्रवादी, साम्प्रदायिक र लागूपदार्थमुखीको आरोप लगाएको कुरा पर्याप्त छ । नयाँ विचार र नेतृत्वसहित हामी राष्ट्र र जनताका पक्षमा समर्पित छौँ । युगीन कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी एवम् उद्देश्यमा अघि बढिरहेका छौँ । एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा दलाल पुँजीवादी सत्ताको खरानीमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने महाअभियानमा छौँ । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सामाजिक दलाल पँुजीवादी एवम् फासिवादी सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो । अन्य कुनै निमित्त कारण देखाउनुको तुक छैन ।
उद्देश्य तीन, जनक्रान्तिका कोपिलाहरूमा डढेलो सल्काउने दुस्साहस । लेनिन, माओ र किम इलसुङहरू पनि त कुनै जमानामा सत्ताका लागि आतङ्ककारी थिए । साम्राज्यवादीहरूका अत्याधुनिक जेस्टार जासुसी भूउपग्रह, लेजर निर्देशित आईसीबीएम, ड्रोन आदि जनताका सामु नकाम छन् । तिमीहरू टाउकाकोे मूल्य तोक, प्रतिबन्ध लगाऊ वा फासिवादी दमन गर, अन्तिम जित जनताकै हुनेछ । कमरेडहरू सुदर्शन, वीरजङ्ग, रणवीर, ओम, शिलु, माइला, आदर्श, दीपेशलगायतलाई तिम्रा जेल–हिरासतमा राखेर दमन गर वा पाल ! अन्य सक्नेजति गर तर ‘कम्युनिस्टहरू आफ्ना दृष्टिकोण र उद्देश्यहरूलाई लुकाउनु घृणास्पद कार्य ठान्छन् । उनीहरू हाकाहाकी घोषणा गर्दछन्– सम्पूर्ण वर्तमान सामाजिक व्यवस्थालाई बलपूर्वक ध्वस्त पारेपछि मात्र उनीहरूको उद्देश्य पूर्ति हुनसक्छ । साम्यवादी क्रान्तिको डरले शासक वर्गहरू थर्कमान होऊन् । सर्वहारावर्गले यसमा आफ्ना हतकडीशिवाय अरू केही गुमाउनु पर्दैन, बरु सम्पूर्ण संसार नै उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्’ (माक्र्स–एङ्गेल्स सङ्कलित रचना, खण्ड १, पृष्ठ ८५) मा माक्र्सले भनेझैँ तिमीहरू धेरैपटक हार अनि हामी अन्तिमपटक जित्नेछौँ ।
धनरूप, तीर्थ, कुमार, रामकुमार र निरहरूलाई गोलीले हत्या गर ! उनीहरू त मृत्युञ्जयी भए तर तिमीहरू किन आतङ्कित ? हेगेललाई उद्धृत गर्दै महान् माक्र्सले भन्नुभएको थियो, ‘विश्व–इतिहासमा ती सबै महत्वपूर्ण घटनाहरू तथा व्यक्तिहरू दुईपल्ट अविर्भूत हुन्छन् : पहिलोपल्ट दुःखान्त नाटकका रूपमा र अर्कोपल्ट प्रहसनका रूपमा ।’ (माक्र्स–एङ्गेल्स सङ्कलित रचना, खण्ड १, पृष्ठ १३३) । तिमीहरूका सबै बासी रणनीतिहरू नकाम र तिमीहरू जार र च्याङकाइसेक हुनेछौ । ‘बेलोरुसभदेखि लिएर मार्तोभसम्म–पुँजीवादी समाजका यी कुकुरहरू एक पुरानो शिवल जङ्गल फाँड्दा जुन काठका छेस्काहरू निस्कन्छन् त्यसबारे हल्ला गर्दै गरून् । सर्वहारा हात्तीलाई भुक्नुबाहेक यी कुकुरहरूको अर्को कामै के छ र ? भुक्न दिनोस् ।’ (सोभियत सत्ताका तात्कालिक कार्यभारहरूमा) लेनिनले भनेझैँ ऐँजेरु दलालहरू हो, आमजनताले प्रतिबन्ध खारेज गरिसके र फासिवादी दमनको प्रतिरोध गरिरहेका छन् । आँखा र कान खोल, गुहार माग साम्राज्यवादी तिम्रा मालिकहरूसँग बचाऊ, बचाऊ, बचाऊ । तर जनताले छोड्नेवाला छैनन् ।
लेनिनकै शब्दमा ‘जनक्रान्तिका कार्यभार विशुद्ध संसदीय सङ्घर्षका कार्यभारभन्दा हजार गुना बढी कठिन र बढी जटिल हुन्छन् ।’ नेपाली जनताले सबै चुनौतीको सामना र दमनको प्रतिरोध गरिरहेका छन् । ‘समाजवादी क्रान्ति एकाङ्गी क्रिया, एउटै मोर्चामा मात्र एक्लो लडाइँ होइन, अपितु यो तीव्र वर्गसङ्घर्षहरूको एक पूरा युग नै हो । अर्थनीति तथा राजनीतिसम्बन्धी समस्त लडाइँहरूको एक पूरा सिलसिला हो । यो बुर्जुवा वर्गको अधिकारच्यूतमा मात्र पूरा हुनसक्छ ।’ (समाजवादी क्रान्ति र जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार) मा लेनिनले मार्मिक रूपमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । यो केपीको झापा आन्दोलन र पुष्पकमलको पालाको जनयुद्ध होइन । माक्र्सले पेरिस विद्रोहलाई ‘आकाशका विरुद्ध धावा बोलेका थिए’ भनेझैँ हो– एकीकृत जनक्रान्ति । एकीकृत जनक्रान्ति १ प्रतिशतका विरुद्ध ९९ प्रतिशत आमजनताको आन्दोलन एवम् अभियान पनि हो । तसर्थ आमजनतालाई दलालतन्त्र स्वीकार्य छैन ।
राणा, पन्चे र राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने आमनेपाली जनता आज मुठीभर दलालहरूका दास बन्न सक्दैनन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सेना र पुलिसका जवानहरू दलालहरूको फाइदाका लागि ठाडो आदेशको भरमा भाडाका हत्याराको काम गर्न अब बाध्य हुने छैनन् । आफ्नो मुलुक र प्यारा आफन्तहरू छोडेर विदेशमा दलालतन्त्रका कारण गुलामको जिन्दगी बिताउन र दलालहरूलाई रेमिट्यान्स बुझाउन, ५५ डिग्रीको तापक्रममा काम गर्न विवश लाखौँलाख युवाहरू बाकसमा होइन, सकुशल स्वदेश फर्किनेछन् र बेरोजगारको कारक दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको टाउकोमा घन प्रहार गर्न तयार हुनेछन् ।
साम्राज्यवादी डाकुहरूको हितमा काम गर्ने दलालहरूको मुनाफाका लागि हाम्रो राष्ट्र र जनता जन्मनेबित्तिकै ऋणी हुनेछैनौँ । प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू बेच्ने, कमिसन खाने तथा भ्रष्टाचार, कमिसन, महँगी, कालोबजारी, चर्को करबाट दलालहरूले सयौँ–हजारौँ खर्ब डलर लुटिरहेका छन् । हरेक डलरमा कलङ्कको छाप छ । प्रत्येक डलरमा रगतको दाग छ । अब कोही पनि दर्शक बन्न सक्दैनन् । दिदीबहिनीहरू विदेशको कालकोठरीमा दास र खेलौना बन्न सक्दैनन् । प्रेम गरेको र चुलो छोएका कारण दलितहरू मर्न तयार हुनेछैन् । सम्पूर्ण देशभक्त, कानुनविद्, सीमाविद्, मानवअधिकावादी, कर्मचारी, मध्यमवर्ग, पत्रकारलगायत शोषित एवम् उत्पीडितहरूले स्वाधीनता, शान्ति, समानता र समृद्धिका खातिर वैज्ञानिक समाजवादको नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् ।
source : eratokhabar
राजनीति गरेकै कारण कहिले सम्म जेल जानू पर्ने अपराधी फुलमाला ले स्वागत गर्दै छुट्ने ?